indlu enomtsalane 2 on 4 hektare nge swimming pool
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguErica
Indlu ekhangayo evalelwe kwindawo etyebileyo ngamanzi ePortugal. Apho uxolo kunye nendawo zisaxhaphakile. Ilungele abantu abadala aba-2. Yingcamla umoya wePortugal wokwenyani kwaye wonwabe! Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.I-WIFI, indawo yokuqubha.Ibhedi ingongezwa ukuba kuyimfuneko.
I-5km ukusuka kunxweme oludumileyo lomlambo waseCardigos, 2km ukusuka eCancelas, unxweme oluzolileyo lomlambo apho unokuqubha nenja.
Indlu ineatmosfera yayo kunye nendawo ekhethekileyo kwaye inefenitshala epheleleyo.Igadi enkulu kunye neterrayisi yabucala enefenitshala yegadi. Iveranda enetafile yokutyela.Lonwabele ilanga, ukujonga kunye nomnye.Indlu ime kwihektare ezi-4 zomhlaba kwigadi kunye negadi yeziqhamo apho unokonwabela isihlalo esikhuselekileyo nesizimeleyo, kwi
i-hammock phantsi komthi we-orenji Umbono ongathintelwanga ukusuka kwiveranda.Ungahamba uye ngqo kwiinduli ukusuka kwipropathi.I-Vila de Rei ikumgama weekhilomitha ezili-12, iLisbon kunye nePorto zifikeleleka lula.
Indlu yabantu aba-2 enendawo yomlilo yangaphandle enokusetyenziswa njenge-BBQ, iveranda enkulu enetafile yokutyela, ikhitshi, isitovu somthi, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa kunye nebhafu emilenzeni.
4.94 ·Izimvo eziyi-34
Iqela le praia fluvials (iendawo zokuqubha emlanjeni) Ekufutshane kwi-2 kunye ne-5 km kunye nedama elikhulu elikufutshane neendawo zemidlalo yamanzi, iikhosi zokuqeshisa amaphenyane kunye ne-wakeboard Ulwandle oludumileyo lomlambo waseCardigos kwiikhilomitha ezi-5. Culture in Tomar, Coimbra, Abrantes, iimarike ezinkulu ezahlukeneyo, hayi Pakistan, A ikomityi yeti ixabisa 0.60 eesenti. esentabeni, iimitha ezingama-400 ukuphakama kunye iimbono ezintle, kusetyenziswa uthungelwano lweendlela elungileyo. Kwakhona nokuhamba ngqo endlwini okanye nge iindlela abonisiweyo. uyakwazi ukuya kwi i adventure apha! AmaPhuthukezi anobuhlobo kwaye aluncedo, ukutya okulungileyo kunye neziselo ngexabiso elihle kunye nomntwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Erica
Ifumaneka ngesicelo sakho semibuzo yoncedo kunye nezindululo ngokuhlonipha ubumfihlo bakho.
Inombolo yomthetho: 5357/AL
Iilwimi: Nederlands, English, Português